Antoine Griezmann oo ammaanay Lionel Messi, sharraxaadna ka bixiyey sirta ka dambeysa dabaal-deggii uu sameeyey markii uu xalay goolka dhaliyey – Gool FM
(Barcelona) 01 Feb 2021. Antoine Griezmann ayaa ammaanay Kabtanka Kooxda Barcelona ee Lionel Messi, waxaana uu sidoo kale sharraxaad ka bixiyey sirta ka dambeysa dabaal-deggii uu sameeyey markii uu goolka ka dhaliyey Athletic Club.
Xiddiga xulka qaranka Faransiiska ayaa hadlay kaddib markii uu gool dhaliyey sidoo kale waxa uu ammaanay Lionel Messi oo laftiisu gool dhaliyey kulankii ay guusha 2-1 kaga gaareen Kooxda Athletic xalay.
“Waan ku raaxaysaneynaa Leo Messi, waana halyeey,” Griezmann ayaa sidaas u sheegay Warsidaha Movistar+.
Griezmann ayaa sidoo kale sharraxaad ka bixiyey fekerka ka dambeeya dabaal-degga goolkiisa, halkaasoo uu ku soo uruuriyay dhammaan xiddigaha kooxda calanka koornaha.
Mar uu arrintaas ka hadlayeyna waxa uu yiri: “Mararka qaar waad ciyaaraysaa, mararka qaar ma ciyaaraysid, laakiin qof walba waa qeyb ka mid ah kooxda.”
Guusha ay xalay gaartay Barcelona ayaa u soo dhaqaajisay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka La Liga iyadoo ka sare martay Real Madrid, waxaana ay 10-dhibcood ka dambeysaa haatan hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Atletico Madrid.